Vovoka NR tsara indrindra (23111-00-4) Mpanamboatra sy orinasa China
Vovoka NR (23111-00-4)
Cofttek no mpanamboatra vovoka Nicotinamide Riboside Chloride tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 2100kg isam-bolana.
NR vovoka (23111-00-4) horonan-tsary
Formula Molecular: C11H15ClN2O5
Molekular lanja: 290.7 g / mol
Anarana simika: 3-carbamoyl-1-((3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride
Synonyms: Nicotinamide riboside; SRT647; SRT-647; SRT 647; Nicotinamide Riboside Triflate, mifangaro α / β
Antsasak'aina: 2.7 ora
fampiharana: Nicotinamide riboside dia voalaza fa endrika vaovao pyridine-nucleoside amin'ny vitamin B₃ izay miasa toy ny didim-pananana amin'ny nicotinamide adenine dinucleotide na NAD +.
Bika Aman 'endrika: Off White to Pale mavo vovoka
Ny vatan'olombelona dia rafitra sarotra vita amin'ny sela, sela ary rafitry ny taova. Ny fiasan'ny sela sy ny sela ao amin'ny vatana dia voafehy sy ampian'ny zavatra simika, anzima ary otrikaina isan-karazany. Ny sasany amin'ireny dia afaka manamboatra tena ny vatana, ary ny sasany kosa mila lanina. Noho izany, ireo sakafo mahavelona ireo dia amin'ny endrika sakafo sy fanafody fanampiny. Ny iray amin'ireto singa ireto izay afaka manampy amin'ny fanasitranana sy fanaraha-maso ny vatana dia antsoina hoe nicotinamide riboside chloride (NR). Manampy amin'ny fampitomboana ny habetsaky ny nikotinamide adenine dinucleotide (NAD +) ao amin'ny vatana izany.
Inona no ataon'ny Nicotinamide Riboside Chloride?
Nicotinamide Riboside Chloride, antsoina koa hoe NR, dia pyridine nucleoside misy vitamina B3. Izy io dia miasa ho toy ny mpialoha lalana ny nikotinamide adenine dinucleotide (NAD +). Azo alaina toy ny vovoka miloko fotsy sy fotsy mangatsakatsaka izy io. Izy io dia iray amin'ireo mpialoha lalana NAD + nandinika indrindra satria manana tombony ara-pahasalamana maro.
Ny NAD + dia mifandray amin'ny iray amin'ireo singa voalohany miasa amin'ny rafitra homeostasis samihafa ao amin'ny vatana. Izy io dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny vatana ho salama, mampitombo ny androm-piainan'ny sela, manampy amin'ny fanatanterahana ireo hetsika metabolika isan-karazany ary manampy amin'ny fitsaboana ireo pathophysiology isan-karazany ao amin'ny vatana.
Ny vovo NR dia naneho ny fahombiazany ho toy ny fiakaran'ny fitsaboana amin'ny aretina isan-karazany. Amin'ny fatra avo, ny NR dia afaka mitsabo ny toe-javatra toy ny aretim-po, ny neurodegenerative aretina, ny musculoskeletal aretina, ary ny metabolic aretina. NR dia naseho koa fa manemotra ny fahanteran'ny sela ary manitatra ny androm-piainany. Izy io dia hita amin'ny vokatra sakafo toy ny trondro, akoho amam-borona, atody, ronono ary serealy.
Mba hahatakarana izay ataon'ny nikôtinamid riboside chloride, dia tsy maintsy fantatsika aloha ny nikotinamide adenine dinucleotide na NAD +.
NAD + dia coenzyme tena ilaina amin'ny vatan'olombelona. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny lalan'ny metabolika samihafa. Ny fisiany ao amin'ny vatana dia ilaina amin'ny fitsaboana karazana aretina maro. Izy io koa dia manampy amin'ny famokarana angovo ho an'ny ati-doha, sela miaro hery ary hozatra.
Ny habetsaky ny NAD + azo alaina amin'ny loharanon'ny sakafo dia kely dia kely. Tsy ampy hampiasana sela maro amin'ny vatana izany. Ka ny fanamboarana azy dia mizotra amin'ny làlana isan-karazany ny vatana. Misy làlana lehibe telo ahafahana mamolavola NAD +. Ny lalan'ny synthesie De novo, ny làlan'ny Preiss Handler, ary ny làlan'i Salvage.
Ny lalan'ny Salvage no dingana mahazatra indrindra anaovana ny NAD + amin'ny vatana. Amin'ity làlana ity, ny NAD + dia miaina fanehoan-kevitra redox. Tafiditra ao ny fihenan'ny setroka elektronika roa, izay avy eo lasa endrika antsoina hoe nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Satria ny fanampiana ara-tsakafo dia tsy ampy amin'ny filan'ny vatana ny NAD +, ny làlan'ny famonjena dia mampiasa sy mampiasa ny NAD + efa misy sy ny endriny samihafa.
Ny iray amin'ireo hetsika lehibe ataon'ny NAD + dia ny fampandehanana ireo sirtuins, vondrona misy anzima 7, Sirt1 ka hatramin'ny Sirt7. Ireo anzima ireo dia manana ny fifehezana ny fahanterana sy ny faharetan'ny sela. Ny sirtuins dia mihetsika amin'ny fizotran'ny metabolika maro, toy ny famoahana insuline, fanentanana ny lipida ary ny valin'ny fihenjanana. Izy io dia afaka mifehy ny androm-piainany mihitsy aza. Mihetsika ny sirtuins rehefa miakatra ny haavon'ny NAD +.
NAD + koa dia substrate ho an'ny vondrona proteinina antsoina hoe poly ADP-ribose polymerase (PARP). Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana ADN sy ny fitoniana amin'ny genome ary mety ho tompon'andraikitra amin'ny androm-piainana lava kokoa koa.
Ny haavon'ny NAD + dia mihena amin'ny taona sy aretina. Ny sasany amin'ireo antony nahatonga ny fihenany dia ny fivontosana maharitra, ny fampitomboana ny hery fiarovan'ny vatana, ary ny fihenan'ny hetsika nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), izay nanjary nihena ny famokarana. Rehefa mihantitra ny vatan'olombelona, ​​dia mitombo ny tahan'ny fahasimban'ny ADN miaraka amin'ny vintana kely kokoa fanamboarana, miteraka fahanterana sy homamiadana.
Misy fomba vitsivitsy hampiakarana ny haavon'ny haavon'ny NAD + amin'ny vatana. Mihinana kely kokoa izy ireo ary mifehy ny isan'ireo kaloria, mifady hanina ary manao fanatanjahan-tena. Ireo hetsika ireo dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny vatana ho salama sy hiasa hatrany.
Teknika hafa hampitomboana ny NAD + dia ahitana ny fihinanana tryptophan sy niacin ary ny fandraisana ny mpanentana NAD + toy ny nikotinamide riboside chloride sy ny monotucleamide nicotinamide.
Ny Nicotinamide riboside chloride no mialoha izay afaka mampitombo ny haavon'ny sela amin'ny NAD +. Izy io koa dia loharanon'ny Vitamina B3. Izy io dia vokatra iray izay miasa amin'ny làlan'ny famonjena ny famokarana NAD +. Izy io dia mivadika ho monotucleamide nicotinamide (NMN) miaraka amin'ny fanampian'ny anzima NR kinase Nrk1. Avy eo dia navadika ho NAD + indray.
Aorian'ny fanomezana NR dia mihombo ny haavon'ny NAD + amin'ny vatana, izay zaraina amin'ny faritra samihafa. Tsy afaka miampita ny sakana amin'ny ati-drà izy, fa navadika ho nicotinamide izay avy eo nafindra tany amin'ny ati-doha sy sela hafa izay mamorona NAD +.
Ny ankamaroan'ny fampahalalana momba ny fahombiazan'ny Nicotinamide Riboside chloride dia avy amin'ny fikarohana biby. Ny fikarohana mifototra amin'ny olombelona dia mbola voafetra ary tena ilaina.
Soa azo avy amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride
Betsaka ny tombony azo avy amin'ny fampiasana Nicotinamide Riboside Chloride. Izy ireo dia:
Fiantraikany amin'ny aretina Neuromuscular
Ny fahaizan'ny Nicotinamide riboside chloride hampitombo ny NAD + dia afaka manatsara ny asan'ny mitochondria. Izy io dia afaka manampy amin'ny fitsaboana myopathie mitochondrial . Ny vovo NR dia naseho koa fa mahomby amin'ny fanatsarana ny asan'ny distrophies hozatra.
Ny vokany amin'ny aretim-po
Ny olana misy amin'ny NAD + metabolism dia mety hiteraka olana amin'ny fo sy ny lalan-dra. Izy io dia mety hiteraka toe-javatra toy ny tsy fahombiazan'ny fo, ny fihenan'ny tsindry, ny fihenan'ny myocardial, sns. (NADH) amin'ny ara-dalàna ary ajanony ny fanovana tsy simba ny sela ao am-po . Izy io koa dia afaka mamadika ny vokatry ny tsy fahombiazan'ny fo.
Ny fiantraikany amin'ny aretina neurodegenerative
Ny aretina Neurodegenerative dia matetika mitranga amin'ny fahanterana. Izy ireo dia mifandraika amin'ny adin-tsaina oxidative izay mety hiteraka fahasimban'ny ADN. Matetika dia hisy fihetsika tsy mahazatra an'ny mitochondria, manaraka ny anton-javatra sasany aorian'izay tsy ahafahan'ny sela miasa tsara. Ny NAD + dia mihena amin'ny habetsahan'ny vatana, mitarika amin'ny fiasan'ny mitochondria tsy mety. Izany dia mety hiteraka aretina neurodegenerative isan-karazany. Izy io koa dia afaka mampitombo ny fahafahan'ny aretin'i Alzheimer.
Ny Nicotinamide Riboside chloride dia mampitombo ny habetsahan'ny NAD + ao amin'ny vatana, mampihena ny adin-tsiran'ny oksidatera ary afaka manamboatra ADN simba ihany koa. Izy io koa dia manampy amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer amin'ny totozy . Izy io koa dia afaka mampihena ny fivontosana ao amin'ny ati-doha, manampy amin'ny fanatsarana ny fahalalana sy ny fitadidiana . Izy io dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny habetsahan'ny proteinina amyloid-β precursor ary ny fanakanana ny amyloidogenesis.
Ny vovo NR dia afaka manakana ny fihenan'ny axon amin'ny endrika aretina mitaiza amin'ny neurodegenerative amin'ny alàlan'ny fanovana ny metabolisma NR ao amin'ny axon . Ny fihenan'ny neurons ganglion spiral izay manentsina ny sela volo cochlear dia mety hitranga aorian'ny fihenan'ny tabataba be. NR dia naneho fa mahomby amin'ny fisorohana ny fahaverezan'ny fihainoana vokatry ny tabataba. Manao izany amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ny sirtuin na ny rafitra miankina amin'ny SIRT3 izay mampihena ny fihenan'ny neurite .
Vokatry ny diabeta
Ny Nicotinamide ribonucleoside chloride dia hita fa mahomby amin'ny fihenan'ny soritr'aretin'ny aretina metabolika toy ny diabeta Type II . Naseho fa manatsara ny fandeferana amin'ny glucose, mampihena ny lanjany ary mitsabo ny fahasimban'ny aty amin'ny totozy. Ka mety hahomby amin'ny fitsaboana ny olombelona ihany koa.
Vokatry ny fahasalaman'ny aty
Ny toe-po toy ny aretina atin'ny alikaola tsy misy alikaola dia naseho nahatonga ny tsy fahampian'ny NAD +. Noho izany, ny fanampiana poeta NR dia mety hanampy amin'ny fanarenana tsara kokoa amin'ireto fepetra ireto .
Vokatry ny fahanterana
Ny NAD + koa dia hita fa mampihena ny fahanteran'ny sela ary mamelombelona azy ireo. Hita ihany koa ny fanatsarana ny asan'ny sela, izay manampy amin'ny fampihenana ny fahanterana .
Tombony ho an'ny klôroida Nicotinamide Riboside mihoatra ireo mpialoha lalana NAD + hafa
Ny NR dia manana bioavailability tsara kokoa ary azo antoka kokoa raha ampiasaina raha oharina amin'ireo teo alohany. Naseho ny fampitomboana ny haavon'ny NAD + bebe kokoa amin'ny fihinanana am-bava ny totozy ary koa ny fanomezana hozatra bebe kokoa ny NAD + raha oharina amin'ireo teo alohany. Izy io koa dia afaka mifehy tsara kokoa ny haavon'ny lipidan'ny rà ary mampitombo ny haavon'ny NAD + ao am-po .
Ny vokatry ny Nicotinamide Riboside Chloride
Ny fihinanana am-bava ny nikotinamide riboside chloride amin'ny fatra ambany dia azo antoka. Mety misy fiatraikany sasany toa izany
Ahoana no hividianana klôroida Nicotinamide Riboside?
Raha te hividy ny vovo NR ianao dia tsara kokoa ny mifandray mivantana amin'ny ozinina mpanamboatra Nicotinamide Riboside Chloride. Izy io dia miantoka fa ny fitaovana tsara indrindra ampiasaina amin'ny famokarana, eo ambany fijerin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra mifandraika amin'izany. Ireo vokatra ireo dia natao manaraka ny torolàlana fiarovana azo antoka izay miantoka fa ny vokatra dia avo lenta, miaraka amin'ny hery lehibe, ary fonosina tsara. Raha ny filan'ny mpampiasa dia azo amboarina ny baiko mifanaraka amin'ny tsirony manokana.
Raha vantany vao vita ny vokatra dia mila tazonina amin'ny hafanana mangatsiaka 0 ka hatramin'ny 4C ho an'ny fotoana fohy ary -20C ho an'ny fotoana maharitra. Izy io dia mba hisorohana azy tsy hanimba na hihetsika amin'ny akora simika hafa amin'ny tontolo iainana.
Chi Y, Sauve AA. Nikotinamide riboside, zavakanto an-tsokosoko amin'ny sakafo, dia otrikaina B3 misy fiantraikany amin'ny metabolismin'ny angovo sy ny neuroprotection. Ny fikarakarana momba ny fikarakarana momba ny fitsaboana azy. 2013 Nov; 16 (6): 657-61. doi: 10.1097 / MCO.0b013e32836510c0. Review. PubMed PMID: 24071780.
Bogan KL, Brenner C. Nicotinic asidra, nikotinamide, ary nikotinamide riboside: fanombanana molekiolan'ny vitaminina NAD + mpasiaka amin'ny sakafo maha-olombelona. Annu Rev Nutr. 2008, 28: 115-30. doi: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. Review. PubMed PMID: 18429699.
Ghanta S, Grossmann RE, Brenner C. Mitochondrial proteineta acetylation ho sela-intrinsika, mpamorona ny fitahiry fitehirizana tavy: lozika sy metabika lojika momba ny fanovana acetyl-lysine. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2013 Nov-Dec; 48 (6): 561-74. doi: 10.3109 / 10409238.2013.838204. Review. PubMed PMID: 24050258; PubMed Central PMCID: PMC4113336.
Vovoka PQQ (72909-34-3)
Vovoka Palmitoylethanolamide (PEA)